साताको तस्वीर : जौँको बाला झुल्यो हजूर, तमान रमाईलो ! | ebaglung.com
२०७६ बैशाख १५, आईतवार ०८:०९	Footer Slider, Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
तमान २०७६ बैशाख १५ । यतिबेला तमानबासीहरु प्रफुल्ल छन् । खेतबारीमा पोटिला दानाहरुले लटरम्म झुलेका गहुँ र जौँँ लगायतका खाद्यान्न बाली देखेर किसानहरु प्रफुल्ल नहुने कुरा पनि हुदैन ।
तमानवासीको मुख्य बालीकोरुपमा लिईने रविबालीको फसल निकै राम्रो भएकोले यसपाली उनिहरु विशेष हर्षित छन् । तमान खोलामा धान बाली एकदमै कम हुने भएपनि मकै बाली भने हुन्छ । यस सिजनमा हिमवर्षाका कारण फसल सप्रिएको किसानहरुको ठम्याई छ । यसपाली गहुँ भन्दा पनि जौँको बाला निकै सप्रिएको उनिहरु बताउछन् । तमानको अधिकांश भूभागमा जौँ र गहुँ झुलेको देखिन्छ । तमानका सात्ला, भैंसीखर्क, नमरका, देउराली, धासगा, धोङखोला, तोङ्खोला, भिरकुना, धाराखेत आदि सबै भूभागमा लटरम्म झुलेका जौँ र गहुँका बालाको दृश्यले कसको मन नहर्ला ?
स्थानीय किसानहरुले गहुँ र जौँ बाली भित्र्याउन सुरु गरेका छन् । दुई चार दिनभित्र बालीनाली स्थानीयले थन्काई सकेको हुनेछन् । ‘मिलिजुली बसौँ, बाँडीचुँडी खाउँ’ भन्ने भनाई तमानमा देख्न सकिन्छ । चिटिक्क मिलेर बसेको गाउँ, सबको धेरथोक जमीनमा लटरम्म झुलेको गहुँ र जौँको बाला हेर्दा यसै तथ्यलाई पुष्टि गरेको प्रतित हुन्छ ।
वर्षको बाह्रै महिना तमान पर्यटकीय दुष्टिले रमणीय गन्तव्य मानिन्छ । सोलेको धुरीको काखमा रहेको लाममेला, तमान पुग्ने आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरु यहाँको व्यवस्थित बसोवास, सरसफाई, विभिन्न जातिका आआफ्नै परम्परा र संस्कृति, अतिथी देवो भवको सद्भावले यहा आउने पर्यटकहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । समायनुकूल होम स्टेको व्यवस्था, आझेलमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान र विकास गरी तमानलाई थप आकर्षक बनाउन सकिन्छ ।
तमानमा हालसम्मपनि मुख्योली प्रथा पनि कायमै रहेको छ । पछिल्लो स्थानीय संरचना अनुसार साबिक तमान, खुंखानी र बोँगादोभान गाविसहरु गाभेर तमानखोला गाउपालिका निर्माण गरिएपनि तमानमा परापूर्वकाल देखी मुख्योली प्रथा चलि आएको छ । तोकिएको समयमा स्थानीयवासीहरुले एक मुखिया चुन्ने प्रचलन छ । गाउँ घरमा गरिने रिति थिती लगायतका विभिन्न सामाजिक कार्यहरु मुखिया प्रथाबाट नै सन्चालन हुँदै आएको छ । यस प्रथालाई गाउपालिकाले पनि सघाउदै आएको छ । तमानका मुखिया ललित बहादुर घर्ती परापूर्वकाल देखी चल्दै आएको मुख्यौली प्रथाप्रति सबैको सद्भाव र सहयोग रहेको बताउछन् ।